Iran oo diiday shuruudaha Biden ee soo nooleynta heshiiskii nukliyeerka | Berberanews.com
Home WARARKA Iran oo diiday shuruudaha Biden ee soo nooleynta heshiiskii nukliyeerka
Tehran-(Berberanews)-Iran ma aqbali doonto shuruudo horudhac ah oo uga imanaya maamulka cusub ee Biden ee ku saabsan barnaamijkeeda Nukliyeerka, Mareykankuna waa inuu ku laabtaa heshiiskii 2015 ka hor intaan wadahadalka la qaban, ayuu yidhi wasiirkeeda arrimaha dibedda.
Javad Zarif wuxuu sheegay in Mareykanku sameeyay “ballanqaadyo” u gaar ah oo ay tahay in la fuliyo.
Madaxweynaha la doortay Joe Biden ayaa sheegay inuu dib uga mid noqon doono heshiiska nukliyeerka isla markaana cunaqabateynta laga qaadi doono hadii Tehran ay ku soo laabato “u hogaansanaanta heshiiska nukliyeerka”.
Labada dhinacba waxay umuuqdaan kuwa doonaya in kan kale uu dib uqeexiyo qodobada heshiiska marka hore. Bishii May 2018, Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu ka baxay heshiiskii laga wada xaajooday madaxweynihii isaga ka horreeyay, Barack Obama. Kadib wuxuu dib ugu soo ceshay cunaqabateyn adag oo dhanka dhaqaalaha ah oo saaran Iran, isagoo badhtilmaameedsaday qeybaha shidaalka iyo dhaqaalaha ee wadanka.
Tehran ayaa tan iyo markii ay dhaaftay xadidaadkeeda howlaha nukliyeerka ee heshiiska lagu dhigay, taas oo sare u qaaday tuhunka laga qabo in barnaamijkan ay u adeegsan karto gabbaad ay ku horumariso bam nukliyeer Dawladeeda waxay ku adkeysaneysaa, si kastaba ha noqotee, in hamigeeda nukliyeerka gebi ahaanba nabad yahay.
Muxuu yahay mowqifka Iiraan ee hadda heshiiska nukliyeerka?
Isaga oo ka hadlaya shir kumbuyuutareed ay martigalisay Talyaanigu khamiistii, Mr Zarif wuxuu sheegay in Mareykanku “uu jab weyn ku ahaa” qaraarkii Qaramada Midoobay ee ayidsanaayeen heshiiskii Nukliyeerka markii uu ka tanaasulay, isagoo ku tilmaamay maamulka Trump inuu yahay “xukun damiir laawayaal ah”. “Mareykanku waa inuu joojiyaa, Mareykanku waa inuu joojiyaa ku xadgudubka sharciga caalamiga,” ayuu yidhi.
“Uma baahna wax gorgortan ah.” Mr Zarif oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in Mareykanka aanu “awoodin inuu shuruudo dhigo”.
Mr Biden, oo loo wado in loo dhaariyo madaxweynaha 46-aad ee Mareykanka 20-ka Janaayo, wuxuu sheegay inuu mudnaanta siin doono ku soo celinta Mareykanka heshiiska isla markaana uu eegi doono cunaqabateynta laga qaadayo, laakiin ay Iran uga baahan yihiin inay marka hore u hogaansanaato shuruudaheeda.
Iran oo diiday
soo nooleynta heshiiskii nukliyeerka
Previous articleShiinaha oo noqday halista ugu weyn ee dhuunta u gashay Maraykanka
Next articleXogta: diyaaradaha dagaal ee Turkiga iyo Pakistan